သမ္မတကြီးတိုက်တဲ့ရေ ~ .
1:12:00 PM ဆောင်းပါး No comments
လက်ခုပ်တီးလိုက်စမ်း ရွှေသီးရေ။ တပ်မတော်သားလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် လေးဦးက ပီအာရ်စနစ် ဟာ မြန်မာနိုင်ငံနဲ့ မသင့်တော်သေးပါဘူးလို့ အမျိုးသားလွှတ်တော်ကို တင်ပြ။မဲခွဲဆုံးဖြတ်ဖို့ မတ်တတ်ရပ် ဆိုတော့လည်း ထိုင်ရာက မထဘဲတပ်မတော်သား ကိုယ်စားလှယ်အားလုံး ကန့်ကွက်မဲပေးခဲ့တယ်တဲ့။ တပ်မတော်သားတွေ ဒီလိုတိုင်းရင်းသားစည်းလုံးညီညွတ်ရေးကို ရှေးရှုလာတာ တို့က လက်ခုပ် လက်ဝါးတီးပြီး ကြိုဆိုရမှာပေါ့။ ဒါပေမဲ့လည်း တို့လက်ခုပ်တီးလို့ မဆုံးခင်မှာပဲ အမျိုးသားလွှတ်တော် မှာ ပြည်ခိုင်ဖြိုးတို့ ညီညာမှုနဲ့ ပီအာရ်ကို အတည်ပြုဖို့ ဆုံးဖြတ်လိုက်ကြတယ်။ ပုဒ်မ ၄၃၆ပြင်ဖို့ အလွန့်အလွန် လက် တွန့်နေခဲ့တဲ့ ပြည်ခိုင်ဖြိုးက ပီအာရ်ကို အလျင်အမြန် အကောင်အထည်ဖော်ဖို့ ကြိုးစားလာတာကို ဆက်စပ်ကြည့်တော့ ပြည်ခိုင်ဖြိုးပါတီခေါင်းဆောင်များ အလွန်အမြော်အမြင်ကြီး ပါလားလို့ ခေါင်းညိတ်မိလိုက်တယ်။ သူတို့မှာ သမိုင်းသင်ခန်းစာကရှိခဲ့တာကိုး ရွှေသီးရဲ့။
၁၉၉၀ ပြည့်ရွေးကောက်ပွဲ ကာလတွေတုန်းက အကြောင်း လေးမင်းတို့ မမီလိုက်လို့ ပြန်နွှေး လိုက်ဦးမယ်။ ၁၉၈၈ မှာ တပ်မ တော်က အာဏာကိုလွှဲယူတယ်။ တပ်က အာဏာသိမ်းတာ လုံးဝ မဟုတ်ဘူးနော်။ လက်ရှိအုပ်ချုပ် သူအစိုးရကိုယ်တိုင်စစ်တပ်လက် ထဲ အာဏာကို ထိုးထည့်ပေးလိုက် တာကွ။ အဲဒီအာဏာ လွှဲစစ် ကောင်စီမှာပါတဲ့ စစ်ဗိုလ်ချုပ်ကြီး တွေရဲ့ ဆရာ့ဆရာတွေက မဆလရဲ့ကိုယ်ပွား တစညပါတီ ကို ထောင်တယ်။ အဲဒီတစညလို့ခေါ်တဲ့ တိုင်းရင်းသားစည်းလုံးညီညွတ်ရေးပါတီက မဆလရဲ့ ပိုင်ဆိုင်မှုတွေ အားလုံးကို ဆက်ခံရတယ်။ တစညပါတီအင်အား ဘယ်လောက်တောင့်တင်းခဲ့သလဲဆိုရင် အလုပ်သမားစည်းလုံးညီညွတ်ရေးပါတီ၊ တောင်သူလယ်သမားစည်းလုံးညီညွတ်ရေးပါတီနဲ့ လူငယ်စည်းလုံးညီညွတ်ရေးပါတီဆိုပြီး ပါတီကြီးသုံးခု ပါထပ်ခွဲလိုက်သေးတယ်။ မဆလရဲ့ ရန်ပုံငွေတွေဟာ ပြည် သူ့ဘဏ္ဍာတွေဖြစ်တယ်ဆိုပြီး တစညပါတီရဲ့ ရပ်တည်မှုနဲ့ ဘဏ္ဍာငွေအပေါ်မှာ အဲဒီအချိန် က ဒီ/ငြိမ်းပါတီဥက္ကဋ္ဌကြီး ၀န် ကြီးချုပ်ဟောင်း ဦးနုက တရားစွဲ ဖို့ထိ စီစဉ်ခဲ့တယ်။ အာဏာရစစ် ကောင်စီ(န၀တ)ကိုလည်း တစညရဲ့ ပြည်သူပိုင်ပစ္စည်းအလွဲသုံးမှုမှာ ထိမ်ချန်မှုနဲ့ တရားစွဲမယ်လို့ ကြေညာခဲ့တယ်။ ပြောရရင် တစညပါတီဟာ စစ်တပ်ကျောထောက်နောက်ခံပြုထားပြီး အင်အားအလွန်တောင့်တင်းတဲ့ ပါတီတစ်ခုအဖြစ် နိုင်ငံရေးပါတီတွေ ကြားမှာ ရပ်တည်ခဲ့တယ်။
ရွှေသီးရေ . . . ခုချိန်က အရမ်းကို ရှုပ်ထွေးနေတယ်။ ပုဒ်မ ၄၃၆ ပြင်ဆင်ရေးအတွက် အသိဉာဏ်ရှိတဲ့ လူတွေ၊ နိုင်ငံကိုချစ်တဲ့ လူတွေအားလုံး ကြိုးစားနေကြချိန်မှာပဲ ၄၃၆ မပြင်ရေး ကန့်ကွက်မှုတွေ၊ ဘာသာရေး သွေးထိုးမှုတွေ၊ လွှတ်တော်တွင်း လူများစု အားကိုးနဲ့ လုပ်ကြံမှုတွေ၊ ဒိုင်ဖြစ်တဲ့ ရွေးကောက် ပွဲကော်မရှင်ရဲ့ အ၀ါ၊ အနီကတ် ခဏခဏနှိုက်နေတဲ့ မြင်ကွင်းတွေ တွေ့ရတော့ တို့ပြည်သူတွေပိုပြီး အသိဉာဏ်ရှိဖို့၊ ညီညွတ်ဖို့ လိုလာပြီလို့ ဆင်ခြင်မိတယ်။ ဒါ့အပြင် ပုဒ်မ ၅၉(စ)ကို မပြင်ဖို့ ပြည်ထောင်စု လွှတ်တော်က ဖွဲ့ထားတဲ့ကော်မရှင်က မဲခွဲဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်ကြားရတော့ နိုင်ငံရေး ပုရောဟိတ်ကြီးတွေ ကို ပြန်ပြီး သတိမိရတယ်။
၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲမတိုင် မီ ဒီမိုကရေစီဆိုတာ အပေါ်က လာတာလား၊ အောက်ကလာ တာလား၊ လူပြောင်းမူပြောင်းတို့၊ လူမပြောင်းမူပြောင်းတို့ အကြီး အကျယ်စကားတွေပြောပြီး လွှတ် တော်နိုင်ငံရေး ကို ဇောင်းပေးခဲ့တဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးတွေ ခုချိန်မှာ တပ်မ တော်ကို၊ လွှတ်တော်ကို၊ အစိုးရကို ပေးဖို့ အကြံတွေများ ကုန်နေကြသလား။
မတူတာတွေ ဖယ်ထားပြီး တူတာတွေ တွဲလုပ်မယ်ဆိုတဲ့ ခပ်ချိုချိုစကားလုံးတွေကြောင့် ဒေါ်အောင်ဆန်း စုကြည် လွှတ် တော်ထဲရောက်လာခါကျမှ ခုဘယ်ဟာတွေက တူလို့ တွဲလုပ် ကြမှာလဲ။ ပုဒ်မ ၄၃၆ လား၊ မတူ ဘူးကွာ ခဏဖယ်ထား၊ ပုဒ်မ ၅၉ (စ) မတူဘူး၊ ခဏဖယ်ထား၊ ၂၅ ရာခိုင်နှုန်း မတူသေးဘူး၊ ဖယ်။ တကယ်တော့ အဲဒီဖယ်ထားတာတွေ က နံစော်ညစ်ပတ်နေတဲ့ အမှိုက် တွေ။ အဲဒါတွေ ဘေးမှာ ဖယ်ပုံ ရင်း၊ ပုံရင်း အမှိုက်ပုံကြီးဖြစ်လာ တာကို မရှင်းဘဲ အမှိုက်ပုံဘေးနား မှာရပ်ပြီး သန့်ရှင်းသော အစိုးရ ဖြစ်အောင် လုပ်နေပါတယ်ဆို တော့ စဉ်းစားသာကြည့်တော့ ရွှေသီးရေ။
ငါကတော့ အဲဒီမတူတာတွေဖယ်၊ တူတာတွေ လက်တွဲလုပ် မယ်လို့ကြားရတိုင်း လူရိုးလူအေး တစ်ယောက် ဆီနဲ့ရေလဲခံရတဲ့ ပုံပြင်လေးသွားသတိရမိတယ်။ မင်းကြားဖူးပြီးသား ဖြစ်မှာပါ။ တစ်ခါက ဆီသည် တစ်ယောက်နဲ့လူလည်တစ်ယောက် ဇရပ်တစ်ခု မှာ ဆုံမိသတဲ့။ လူလည်က သူ့မှာပါလာတဲ့ ဆီးဖြူသီးကို လောကွတ်လုပ်ပြီး ကျွေးသတဲ့။ ဆီးဖြူသီးဖန်တန်တန်ကို မစားဖူးတဲ့ ဆီသည်ကလည်း စားကြည့်တာပေါ့။ ပြီးမှ ဟိုလူလည်က သူမှာပါလာတဲ့ ရေကို တိုက် တော့တာ။ ဆီးဖြူသီးစား ပြီးရေသောက်တော့ ချိုသွားတာပေါ့။ ဒါကိုမသိတဲ့ ဆီသည်လူရိုးက ‘‘ဟာခင်ဗျားရေက တယ်ချိုပါ လား’’လို့ ပြောသတဲ့။ ဒီမှာတင်လူလည်လူလိမ်က ဘယ်တော ဘယ်တောင်ကရတဲ့ရေ၊ ဘာပျောက်တယ်၊ ညာပျောက်တယ်၊ဘာကောင်းတယ်ဆိုပြီး လုပ်ပါ လေရော။ ဟိုဆီသည်ကလည်း လူရိုးလူအဆိုတော့ ယုံကြည်ပြီး သူ့မှာပါတဲ့ ဆီနဲ့ လူလည်ရဲ့ ရေကို လဲလိုက်ပါလေရော။